कलाकार निशा घिमिरेः कस्ती थिइन् कस्ती भईन ! आँशु झार्ने फोटो/भिडियो -
Home Flash News कलाकार निशा घिमिरेः कस्ती थिइन् कस्ती भईन ! आँशु झार्ने फोटो/भिडियो
कलाकार निशा घिमिरेः कस्ती थिइन् कस्ती भईन ! आँशु झार्ने फोटो/भिडियो
कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा बनेको छ । निकै नै दयनीय अवस्थामा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा जो कोही निशब्द बन्छ ।
तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियो, केही टेलसिरियल तथा छोटा फिल्महरुमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्तुत
कुनै समय सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्षरत निशा। तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियो, केही टेलसिरियल तथा छोटा फिल्महरुमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । ललितपुर कालेश्वर, बतासेकी उनी यसक्षेत्रमा केही गरेरै छोडने अठोटका साथ लागि परेकी थिइन् । भविष्यमा एक सफल कलाकार बनेर आमदर्शकमाँझ चिनिने उनको सपना चकनाचुर बनेको छ ।
अभिनय पढ्ने सिलसिलामा उनी केही समय अगाडि भारतमा गएकी थिइन्। शो क्रममा उनी सवारी दुर्घटनामा परेकी हुन् । भारतको तेरादुनस्थित निशा सहितको ४ जना विद्यार्थी सावार रहेको कारमा ट्रकले ठक्कर दिंदा दुर्घटना घटेको निशाका बाबु बताउछन।
बाबुको अनुसार, त्यस समय उनलाई भारतकै कैलाश अस्पतालमा १८ दिनसम्म राखियो। त्यति बेला भारतीय रुपैया १० लाख खर्च भएपछि आर्थिक अभावका कारण उपचार खर्च जुटाउन गार्हो भएपछि उनलाई नेपाल ल्याई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो ।
केही दिन पहिले पहिलो पटक टिकटकमा उहाँको यस्तो नाजुक अवस्था देख्दा आँसु रोकिएन मेरो !पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्ने जो कोहीको आँखा रसाउछ
मेरो अनुरोध हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छिन्,’ उनले सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि पनि सम्पूर्ण विवरण दिएका छन् ।
त्यसैले सहयोगी मनहरुले सनराइज बैंकमा निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरेको नाममा रहेको खाता नम्बर ०८४०६१३६१३२०५००१ मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । निशाको परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण सक्ने सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गरिएको छ । सहयोगका लागि निशाका बुवालाई सिधा सम्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ ।